Kooxaha Gurmadka Ruushka Oo Badbaadiyay 3-Jir Ku Luntay Kaymaha Siberia 11-Cishana La Noolayd Raxan Yey Ah | Hawraar
August 15, 2014 Musasalo No comments
Kooxaha Gurmadka Ruushka Oo Badbaadiyay 3-Jir Ku Luntay Kaymaha Siberia 11-Cishana La Noolayd Raxan Yey Ah
Kooxaha gurmadka dalka Ruushka ayaa ku guulaystay inay helaan, gabadh yar oo sadex jir da’deeda lagu qiyaasay, taas oo 11-cisho ka hor ku luntay kaymaha Siberia ee dalka Ruushka, gabadhan yar oo sida la sheegay muddada intaa leeg la noolayd raxan Yey dad qaad ah, laakiin iyada Alle uga sahlay.
Gabadhan yar oo lagu magacaabo, Karina Chikitova, waxa ay ku luntay kaymaha Jamhuuriyada Sakha ama Yakutia loo yaqaano, kuwaas oo wakhtiga xagaaga ee dhulku kululaado caws faro badani ka baxo, isla markaana ah kuwo markooda hore aad u cufan oo jiq ah.
Sida wakaaladaha wararka dunidu ku warameen, gabadhan yar ayaa gurigooda ka baxday wakhti labadeeda waalid ay soo booqnayeen tuulo u dhow magaalada ay degan yihiin, oo qaraabadoodu degan tahay, waxaanay guriga ku soo noqdeen iyada iyo Eygoodu oo wada maqan, laakiin Eygii ayaa isagu wakhti yar ka dib guriga ku soo noqday isaga oo aanay la socon gabadhaas yari.
Hawl galka lagu baadi goobayay ayaa waxa markii hore loo diray dhawr diyaaradaha ah kuwa aan duuliyaha lahayn ah iyo diyaarad helicopter ah oo ay wataan, dad ka raadiya kaymaha jiqda ah ee degaankaas, oo wakhtigan ay adag tahay sida qof aad u yar oo cawsku qarinayo looga heli karo.
Sida wargeyska New Times ku waramay, eygii xaafada ee la socday gabadhaas yar ayaa la kexeeyay waxaanu ku guulaystay inuu kooxihii gurmadka geeyo, meeshii ugu danbaysay ee ay ku kala lumeen, muddo saacad ah ka dib waxa suura gashay in la helo iyadoo geed hoostii huruda, halkaas oo raxan yey ahi ku xeernayd, laakiin markii danbe ay ogolaadeen in la qaado, cusbitaalka ayaa la dhigay si caafimaadkeeda loo baadho.